Ukuphupha ingane efile: ingane efile, ukuzala ingane efile.
Kungani ingane efile iphupha?
Iyini iphupho owabonile ukufa kwengane?
Ukuhumusha Iphupho: Ukufa Kwengane Yenqunu
Uqinisekile ukuthi ubuthongo obunzima kakhulu bungacatshangwa lapho abafileyo bekhona khona. Ikakhulukazi iphathelene nezingane. Kodwa, njengoba kunjalo njalo ngemibono enjalo, incazelo iyoba yinto enhle kakhulu. Isibonelo, umntwana oshonile uthi umlayezo omuhle uzofika maduze kumphuphi.
Kuthiwani uma ukufa kwengane yakho kuphupha? Ukubona ukufa komntwana womunye
Kuthiwani uma ukufa kwengane yakho kuphupha?
Abesifazane abangenazo izingane bangakwazi ukubona lokhu - isibonakaliso esiqondile sokuthi izindaba zezimali zizophuma maduzane. Kodwa owesifazane okhulelwe, obona ukufa kwengane yakhe esanda kuzalwa noma, nakakhulu, ukufa kwengane ekubelethweni, kufanele kuqala ukuzola. Izazi zengqondo zihumusha lo mbono njengophawu lokusola kwalowo wesifazane yena, owesaba ukuzala futhi wesaba ukuthi ngeke abhekane nendima ebhekene nomama.
Ladies izingane zabo sezikhulile kakade, kodwa umntwana ofile wacabanga ephusheni, kufanele anakekele kakhulu inzalo yabo. Akunakunyulwa ukuthi bazohileleka enkampanini embi futhi impilo yakhe nempilo yakhe isengozini. Zama ukukhuluma nengane yakho ukuze imvikele ngomusa ethonyeni elibi.
Yini izingane ezifile eziphuphayo?
Ngokuvamile amaphupho okufa kwezingane zawo aphathwa ngokunemba futhi ngokuphambene nalokho. Isibonelo, indodana yakho manje igula kakhulu, futhi waphupha ukuthi ufile. Lokhu kusho ukuthi maduzane ingane izobuya futhi ngokushesha masinyane. Futhi uma izingane zakho ziphilile, iphupho lokufa kwabo liwuphawu oluhle nhlobo. Uthembisa le nzalo impilo ende futhi ejabulisayo.
Ukukhulelwa okukhulelwe emva kokuphupha mayelana nokuzalwa komntwana ofile kufanele kubonakale kudokotela. Ngisho noma okwamanje ingane yakhe yesikhathi esizayo ingasongelwa, akusho ukuthi owesifazane angakwazi ukuvimbela ithonya lezinto ezimbi ezingaxhomeki kuye.
Ukubona ukufa komntwana womunye
Ukuchazwa kokulala, lapho ubona ukuthi ingane engazi wena, iphathwa ngendlela ehlukile.
Intombazane efile ibonisa ukumisa ekuthuthukiseni ngokomoya. Ikakhulukazi iphathelene nobuntu bokudala. Ngemuva kwephupho elinjalo, kufanele balinde ukuma emsebenzini futhi balinde isikhathi eside omunye "ukuhlaselwa" wokuphefumulelwa.
Abantu bebhizinisi ngeke bajabule kakhulu ukubona umfana ofile ephusheni, njengoba lokhu kubonisa izithiyo ezibalulekile ekuqhubeni ibhizinisi. Kungase kudingeke ukuba umise okwesikhashana ukukhiqizwa, okuyokwenza ukuthi isimo sakho sezezimali sithinte kabi.
Kwenzeka futhi ukuthi ephusheni ubona ukufa komntwana ofile. Lokhu akuyona uphawu oluphumelela kakhulu, okusikisela ukuthi impilo yomphuphi ayifuni kahle kakhulu. Kufanelekile ukuyeka imisebenzi enomthwalo wemfanelo noma izinyathelo ezintsha, ngoba zizobhujiswa kusengaphambili.
Uma uzama ukondla ingane efile ephusheni, khona-ke kufanele ube nomthwalo wemfanelo ekubhekeleni kwezezimali zakho. Uma uthenga izinto ezidingekayo kuphela futhi ungazitholi izinto zokunethezeka nokuzilibazisa okungavinjelwe, khona-ke uzophumelela ngempumelelo ekugwemeni isikhathi sokuntuleka kwemali ngokuphelele.
Kungani ingane efile iphupha owesifazane okhulelwe
Abesifazane, njengezilwane ezibucayi kakhulu, basabela ngokomzwelo emaphupheni anjalo futhi babe nokwesaba ukuthi izingane zabo ezingenakulinganiswa zingenzeka. Kodwa, njengoba ubona, akukho nhlobo ekhethekile mayelana nokufa kwezingane noma ingane, uma ihunyushwa ngokunembile futhi ihlolisise yonke imininingwane nemininingwane. Futhi abesifazane basesimweni esithakazelisayo, futhi ngokuvamile kufanele baziphathe ngokuzithoba futhi banganqotshwa ukucasula umuntu ongenalo ulwazi.
Ukuqomisana nomuntu: izitatimende zephupho zizothini?
Kwakuyiphupho ukuthi indlu yakho iphangiwe. Ukuhunyushwa Okudumile
Fly ngezindiza ephusheni
Kungani nginezinwele ezinde?
USobchak okhulelwe uvuma uShnurov othandweni
Ukunakekela nokuhlanzeka kwengane yomntwana
Yini ewusizo eshawulweni ohlukile
Izikhumba zenjoloba ekhabethe labesifazane
Lasagna nge-zucchini kanye nebhethoni
Yini okudingeka uyithathe nawe eholidini?
Indlela yokugubha usuku lokuzalwa kwengane ekhaya
Umonakalo wokubeletha isikhathi eside
Indlela yokususa ngokushesha ukulimaza
Ukudla ku-syndrome eyathukuthela
Umdwebo omuhle woSuku lwe-Cosmonautics - ngezigaba ngamapayipi kanye nebhayisikili, nepensela - yezingane ezingama-3, 4, 5, 6, 7, ekilasini - Izigaba ezihamba phambili ngezinyathelo ekudwebeni i-Day of Astronautics enezithombe namavidiyo
Indlela yokulahlekelwa isisindo emva kweminyaka engu-30, 40 no-50
Imilenze efanele: indlela yokukhetha amathanga afanele